(Daawo) Sen. Muse Sudi "Farmaajo waxa ku soo haray calool & gacan bidix ah, ee haleyska qabto" - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Daawo) Sen. Muse Sudi “Farmaajo waxa ku soo haray calool & gacan...
(Daawo) Sen. Muse Sudi “Farmaajo waxa ku soo haray calool & gacan bidix ah, ee haleyska qabto”
Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka hadlaayay xafladda caleema saarka Axmed Madoobe aya sheegay in dalka uu ku dhacay ceel dheer loona baahan y ahay in degdeg loo tashto lagana saaro dalka ceelka uu ku riday Farmaajo.
“Farmaajo waxaa labada lug ka goostay Jubbaland & Puntland, gacanta midigna waxaa ugu dhagan Galmudug, waxaa u soo haray gacan bidix oo an wax lagu cuni karin iyo calool ay ka buuxdo xaasidnimo”
Sen. Muuse aya sheegay in uu Farmaajo is qariyo balse uu yahay shaqsiga bixiya dhammaan amarada Wasaaradda Arrimaha Gudaha, iyo Wasaaradda duulista hawada ee lagu cunaqabateeyay shacabka Jubbaland iyo Muqdisho.
Sen. Muuse aya sheegay in si degdeg ah wadatashi loo iclaamiyo dalkana la badbaadiyo.
Previous articleMadaxweyne Guuleed oo ku baaqay in laga tashado Xaalada dalka oo aan Farmaajo loogu simin !
Next article(Daawo) Sen. Faroole “Dowlada Farmaajo dalka qalqal iyo Jahwareer weyn ayeey gelisay”